Blog Suuqgeynta Mobilada iyo Tablet | Martech Zone
Suuqgeynta mobilada, suuq geynta SMS, barnaamijyada moobilka, iyo alaabada teknolojiyada suuq geynta kiniiniyada, adeegyada, iyo wararka suuqleyda Martech Zone
3-da astaamood ee ku jira iOS 16 oo saamayn doona tafaariiqda iyo ganacsiga E-commerce
Mar kasta oo Apple ay yeelato sii dayn cusub oo IOS ah, had iyo jeer waxaa jira taageere weyn oo ka dhex jira macaamiisha oo ku saabsan horumarinta khibradda ay ku gaari doonaan iyagoo isticmaalaya Apple iPhone ama iPad. Waxaa jira saameyn la taaban karo oo ku saabsan tafaariiqda iyo e-ganacsiga sidoo kale, in kastoo, taas oo inta badan lagu dhayalsado kumanaan maqaallo ah oo lagu qoray shabakada. IPhones-ka ayaa wali xukuma suuqa Maraykanka oo leh 57.45% saamiga aaladaha mobilada - sifada la xoojiyey ee saameeya tafaariiqda iyo ganacsiga e-commerce
Bilaabida istaraatijiyad fariin qoraaleedku waxay noqon kartaa geedi socod fulineed oo adag. Rumayso ama ha rumaysan, sidayaal inta badan waa buug-gacmeed xataa maanta… soo gudbi warqado, haynta xogtaada iyo siyaasadaha khaaska ah dib ha loo eego, oo saxeex oggolaanshaha SMS. Iskuma dayo in aan dhayalsado muhiimada ay leedahay u hogaansanaanta dhex dhexaadintan, laakiin jahawareerka socdaalka ama isku darka xalalka SMS waxa ay aad u niyad jabin kartaa suuqgeeye sharciga ah. Habka Suuqgeynta SMS waa mid aad u adag